Daaficii dhiigiisa daadiyey Neymar oo Markale Weeraray Xidiga Braziil+Sawiro+Video | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Daaficii dhiigiisa daadiyey Neymar oo Markale Weeraray Xidiga Braziil+Sawiro+Video
Cayaaryahanka ddifaaca xulka Bolivia, Yasmani Duk ayaa diiday inuu raali galin ka bixiyo dhacdadii suxulka uu wejiga ku qarxiyey Neymar ahayd, taasi haba joogtee, wuxuu kaloo ku waaniyey xiddiga Barcelona inuu iska daayo dhaqanka istusnimada ah.
Duk ayaa qabsaday wajahada hore ee warbaahinta dunida, kadib markii uu kamaradaha ka soo baxay isagoo wejiga si cadaawadi ka muuqato suxul ama jiqil ugaga dhufanaya laacibka Neymar, ciyaartii isreeb reebka koobka aduunka ee xulka qarankiisa Bolivia ay la ciyaareen Brazil Khamiistii – talaabadaas oo sababtay inuu dhiigu qariyo wajiga ciyaaryahanka reer Brazil.
Warbaahintu badi waxay ku eedeynaysay laacibkan 28 jirka ah, inuu cadhaysnaa markuu falku dhacayay, wallow ay kubbada kala cidhiidhsanayeen, laakiin ciyaaryahanka falka geystay laftiisa ayaa u qiil sameeyey ficilka uu ku kacay, kuna tilmaamay inay ciyaarta kamid tahay.
‘Neymar wuxuu nagu ahaa mid isku dayaya inuu naga xanaajiyo oo kubbada ku dheel dheelaya, ciyaartu intay socotay oo dhana sidaasu ahaa, balse anigu kaliya waxaan doonayay inaan kubbada ka dilo – taasina waa wax kubbada cagta waligeed lagu soo dhex samayn jiray,’ ayuu Duk u sheegay majalada AS.
‘Qof kastaa wuu og yahay in xoog-xooguna ciyaaraha ka qayb yahay – Anigaba sankaa la igu jabiyey, mana jirin qof juuq ka yidhi oo ka hadlay.
‘Si aad u noqoto xiddiga aduunka ugu fiican, waa inuu joojiyaa dhaqankan istusnimada iyo isyeel yeelka ah oo uu bilaabaa inuu tixgalin iyo xushmad u muujiyo ciyaaryahanada ka soo horjeeda.’